Waldaan Fannoo Diimaa Itiyoopiyaa Hundeeffama Isaa Waggaa 80ffaa Kabaje
Kabajaa hundeeffama WFDI oggaa 80ffaa irratti barattoonni dandeetti isaanii agarsiisan.
Waldaan fannoo diimaa Itiyoopiyaa waggaa hundeeffama isaa 80ffa kabajuu kan jalqabe waggaa darbe ennaa waggaa 80 guutee ture. Akka karoora waldaan kun lafa kaa’atetti waggaa tokko keessatti waggaa hundeeffama isaa 80ffaa sababaa godhachuu dhaan qophiiwwan adda addaa qopheessaa ture. Hara’a qopheen kun agarsiisawwan daldalaa fi egzibiishinii qophaa’een sirna kana eebbisanii kan banan prezidaantii Itiyoopiyaa Dr. Mulaatuu Tashoomee turan.
Haasaa jalqaba irratti dhageessisaniin ayaana waldaa fannoo diimaa fi baatii diimaa baranaa adda kan godhu gam tokkoon jijjiirama qilleenaa uumameen kan ka’e hongee mudateen lammiiwwan keenya miliyoona 10 ol ta’an rakkoo oolchuuf birmannaa kan itti goonu, gam kaaniin immoo humnootii kaayyoo hin qabneef karaa daangaa Sudaan kibbaa cabsanii Gambeela seenuu dhaan lammiiwwan keenya 208 irratti fixiinsa gara jabinaa raawwatniif ijoollee 108 ukkaamsanii butuu isaanii gadda guddaa dhaan kan itti yaadannu ta’a jedhan.
Giddu-gala Leenjii WFDI
​Itti aasnuu dhaanis maddi rakkoolee kanaa adda adda haa ta’u iyyuu malee waldaa fannoo diimaaf garuu lamaanuu dhimma gargaarsa dhala namaa ta’uu yaadachiisanii, hamma humni danda’e deggersi kan godhamu ta’uu ibsaniiru. Waldaan fannoo diimaa lammiiwwan hongee dhaan miidhaan irra ga’e gargaaruuf yaalii inni godhes galateeffataniiru. Prezidaantiin fannoo diimaa Itiyoopiyaa Dr. Ahmed Rajaa gama isaaniin yeroo ammaa nyaata madaalawaa itti dabalaa kanneen isaan barbaachisu harmoolii harma hoosisan, dubartoota ulfaa fi daa’imman umuriin waggaa shanii gadii miliyoona 1.7 keessaa waldaan kun kanneen kuma 107 ta’aniif ilaalcha addaa kennee hojjetaa jira.
Dr. Ahmed Rejaas dhuma irratti tajaajil gargaarsa waggaa 80 kan waldichaa beeksisuuf waggaa tokkoof qoophee adda addaa addaan karoorfamaa kan ture agarsiisa daldalaa galiin isaa lammiiwwan hongeen miidhamaniif ooluun kan xumuramu ta’uu ibsanii jiraattonni Finfinnee agarsiisa sana daawwachuu dhaan irratti hirmaatee deggersa namoomaa qabu akka agarsiisu waamicha dabarsianiiru. Waldaan fannoo diimaa Adoolessa 1 bara 1927 labsii ba’een kan hundeeffame dhaaba gargaarsaa biyya keessaa ta’uun beekameera.
Hanqinni Nyaataa Itiyoopiyaa keessaa yaaddessaa dha jedha OCHAn